Vatofantsika CLA Solombavambahoaka H15, antsoina koa hoe fisaka tariby clamp na Mitete tariby clamp, dia natao ho ampiasaina amin'ny manodidina mitete telegrama na fisaka ADSS sy FTTH fibre optic telegrama ao amin'ny an-trano. Raha oharina amin'ny ODWAC-22 clamp , fibre optic tariby io clamp manana fijery, izay hanatsorana ny fametrahana dingana amin'ny mamela ny fametrahana ny fiara mikatona farango, sy ny tsato-kazo mitete fononteny mahitsizoro Fittings tariby sy ny fitaovana.
Mitete disadisa clamp dia fitaovana amin'ny lafiny roa heny anja, fa manodidina sy ny Fibre Optic Cables mifanaraka amin'izany.
Mitete clamp H15 na ny fanaka UV mahatohitra polymer sy ny tafo vy hook.
Avy eny ambony rehetra mifandraika amin'ny fanorenana FTTH tariby tsipika vokatra toy ny rano indray mitete clamps tariby, sns vata Optical famaranana dia avaliable in Jera ny vokatra isan-karazany.
FTTH clamp H15 azo nanome na manokana na miaraka tahaka ny fiangonana hafa nilaina FTTH Fittings tariby.
fisaka (5-8) * 2
Optical hafa fibre mitete tariby clamps dia mora tokony haka araka ny milina fanoherana sy ny savaivony ny telegrama 'tariby ny mpitondra hafatra. Mitete tariby anchoring clamps azo nametraka amin'ny maty-end, roa maty misy fiafarana tambajotra tariby lalana. Fibre optic mitete tariby clamps endrika mamela hanohitra ampy enta-mavesatra tsy misy tariby taratasy kely sy ny fahavoazana.
Ny fiangonana rehetra nandalo fitsapana ny tensile, hetsika traikefa amin'ny mari-pana miainga amin'ny - 30 ° C hatramin'ny +50 ° C fitsapana, ny hafanana bisikileta fitsapana, fizahan-toetra be taona, harafesiny fanoherana fitsapana etc.
Previous: ACCC, ACSR Twin ambony tie LJS
Manaraka: Turnbuckle T-30-01
Vatofantsika clamp H15
mitete tariby clamp H-15
Mitete tariby clamp H15
fibre optic ho an-trano
FTTH tariby Fittings